Muxuu Carlo Ancelotti ka yiri kulanka adag ee kooxaha Bayern Munich vs Barcelona?? – Gool FM
(Madrid) 08 Dis 2021. Carlo Ancelotti ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in kooxda Real Madrid ay kaga soo baxday kaalinta koowaad Group-ka D, isaga oo dhinaca kale sheegay inuusan dan ka lahayn masiirka Barcelona oo caawa la ciyaari doonta Bayern Munich kulan nolal ama geeri ah.
Real Madrid ayaa saddexda dhibcood ka qaaday kooxda Inter oo marti u ahayd, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, waxaana goolasha Los Blancos u kala dhaliyay xiddigaha kala ah T. Kroos iyo M. Asensio, iyada oo group-kan D ay ka soo baxeen labada kooxood Real iyo Inter.
Haddaba macalinka kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti oo ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu yiri:
“Jawi aad u wanaagsan ayaan ku heysanaa qolka labiska, waxaana jira tartan u dhexeeya ciyaartoyda.”
“Waxaan qabaneynaa shaqo fiican, waxaana horumar ka sameeynay dhanka daafaca, si ka duwan bilowgii xilli ciyaareedka.”
Ancelotti oo la weydiiyay su’aal ahayd suurtogalnimada ay Barcelona kaga hari karto haddii ay dhacdo guuldarro ka soo gaarto Bayern Munich kulanka caawa ayaa wuxuu ku jawaabay:
“Waxba igama gelin masiirka Barcelona, waan ku raaxeysatay wixii aan sameynay caawa, iyo inaan ku guuleysanay inaan ku dhameysano group-ka inaga oo hoggaamineyna, si fiican ayaan u shaqeyneynaa.” Ayuu yiri tababare Carlo Ancelotti.